I-English Academic English Yezingane - Isikole soLimi se-BLI eCanada
Thuthukisa amakhono akho ezemfundo ngesiNgisiIsi-Academic English
IsiNgisi yisihloko esibaluleke kakhulu sokungena ekolishi noma eyunivesithi emazweni amaningi. Ukuzilungiselela kahle kufanele. Ukwazi ukubhala ama-eseyi ahlelwe kahle kudlala indima ebalulekile.
Izindatshana zokubhala zifuna ukugxila, ukuhlelela, ukuthuthuka, nokusetshenziswa okucacile kolimi ezimeni ezihlukene.
Ukubhala IsiNgisi Kwenzelwe Intsha uhlelo oluhle olwenzelwe ukukusiza ukuthi uthole amakhono kangcono okufunda nokubhala okuzosiza ingane yakho ukuthi ithole amamaki aphezulu esikoleni, futhi ilungele kangcono impumelelo yangasemva kwesekondari.
Izifundo zethu zisebenzisa izinto ezijwayelekile zesiNgisi, njengezindatshana, ezibandakanya ukukhulumisana okuhlelekile kwesiNgisi nolungakahleleki.
• Ukuhlaziya izindima zetimu, umqondo ophambili namaphuzu asekelayo
• Ukucacisa imibono kanye nokuphikisana
• Ukubhala izinhlobo ezahlukene zezindatshana
• Ukuthuthukisa izakhi zezigaba
• Ukuhlola umsebenzi
Iseshini engu-1 = amasonto ama-4